बेदमा महिलाहरुको स्थान | Hamro Patro
२२ साउन २०७७, बिहिवार
अतिगंदा वनाजी शतभिषा
बिहानको ०७ : २९
बेदमा महिलाहरुको स्थान
Suyog Dhakal - Jan 10 2018
मनुस्मृती र पुराणहरु थोरै ज्ञान भएका पुरुषहरुको ज्ञान सिमीतताको उपज हो । यिनमा धेरै अपव्याख्या, भेदभाव र त्रुटिहरु छन् । उपनीषध र गीताहरु चाँही सत्य सनातन ग्रन्थहरु हुन्। स्वामी बिवेकानन्द
पछिल्लो समयमा बिश्वभरिनै बैदिक कर्ममा महिलाहरुलाई बर्जित गरिएको अनि सनातन सस्कारमा महिलाहरुलाई समानता नभएको तर्कहरु चलिरहेको छ । यसै तर्क अनि अल्पज्ञानलाई आधार बनाएर धर्म परिवर्तन,आलोचना अनि निकृष्ट बचनहरु हिन्दु सनातन परम्परा माथि लगाइरहेको अवस्था छ ।
आउनुहोस आज थोरै शास्त्रार्थ गरौं कि के साच्चीकै सनातन सस्कारमा महिलाहरुलाई बेद पाठमा बर्जित गरिएकै हो त ? शास्त्रले के भनेको छ त ?
बेद पाठ गर्दा महिलाहरुको सन्तान उत्पादन क्षमतामा कमी आउने अनि भार पर्ने लगायतका फगत धारणाहरु ल्याइएको पाइन्छ जबकी यि कुराहरुमा कुनै सत्यता छैन् । बेदमा रहेको ताण्डेय ब्रह्मणा मन्त्र त झन महिलाहरुले मात्रै पाठ गर्नुपर्ने मन्त्र हो, बेदमा त्यस्तो कुनै प्रकारको लैगिंक भेदभाव छैन भनी द हिन्दु टाइम्सले समेत पटक पटक प्रकाशीत गरेको छ ।
हरिद्धारको आचार्यकुलमका उपप्रधान आचार्य कृष्ण भट्ट स्वयमले बिवाह पश्चात आफ्नी धर्मपत्नीलाई बेद सिकाएको बताएका छन् । द हिन्दु टाइम्सलाई बताँउदै आफ्नी श्रीमतीले बिवाहपछि नै सस्कृत अनि बेद ज्ञानमा मास्टर्स अनि एमफील गरेकी स्पष्ट पारेका छन् । उन्का अनुसार हरिद्धारको आचार्यकुलममा जुनै जात, धर्म या कुलका बालबालिका या बिधार्थीलाई पनि निसन्देह अनि समानरुपले बेद अनि सस्कृत सिकाइने गरेको छ ।
उनका अनुसार बेद ज्ञानमा त झन बैज्ञानीक रुपमा ग्रह, दीशा, गुरुत्वाकर्षण अनि ब्रह्माण्डका बारेमा सिकाइन्छ । उता अर्थव बेदमा त झन नैरोग्यताका लागि बिभिन्न जडीबुटी अनि पद्धतीका प्रयोग पनि सिकाइन्छ । बिभिन्न अध्ययनहरुले पनि बैद्धिककालमै पनि महिलाहरुले समानरुपमा बेद अध्ययन गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यसपछि ईशपूर्व २००० बर्षमा आएको मनुस्मृती सुत्रका कारणले बेद अध्ययनमा केही सिमा कोरिएको या कोरिन गएको अनि गलत धारणाको बिकास हुन गएको भनि बिभिन्न अध्ययनकर्ताहरुले लेखेका छन् । मनुस्मृती र पुराणकै बिषयमा स्वामी बिवेकानन्दको धारणा जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्न चाह्यौं ।
मनुस्मृती र पुराणहरु थोरै ज्ञान भएका पुरुषहरुको ज्ञान सिमीतताको उपज हो । यिनमा धेरै अपव्याख्या, भेदभाव र त्रुटिहरु छन् । उपनीषध र गीताहरु चाँही सत्य सनातन ग्रन्थहरु हुन्।
शुक्ल यर्जुबेदा को २६ को २ मा स्पष्टसंग लेखिएको छ कि पुरुष महिला दुबैका लागि बेद समान छ भनेर।
यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः।
ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय॥
अर्थात जसरी मैले यि आशिषका शव्दहरु कुनै भेदभाव बिना भनें त्यसैगरि श्रोता या अध्यनकर्ताले पनि यी ज्ञानका बचनलाई हरेक पुरुष या महिलासमक्ष बाँढ्नु । ति व्यक्तिहरु ब्राह्मण, क्षेत्रिय, बैष्य, शुद्र, बिदेशी या अन्य ग्रहवाट आएका प्राणी किन नहुन् ।
यर्जुवेदको १३ को २६ ले पनि त्यस्तै कुरा उजागर गरेको छ ।
महिलालाई सम्बोधन गर्दै महिलाहरु लाई कुनै पनि चुनौती या अफ्ठेराहरुले पराजय गर्न नसक्ने र महिलाहरुसंगको शक्तिले जस्तासुकै भयावह शक्तिलाई पनि पराजित गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । हजारौं मानव बरावरको सार्मथ्य एकै महिलाहरुमा हुने कारणले आफूसंग भएको शक्तिलाई जागृत र पहिचान गर्दे अगाडी बढ्न आग्रह गर्दछ । बिश्वले महिलावाट अदम्य साहसको अपेक्षा गरेको छ भन्ने अर्थ यस श्लोकले लगाँउदछ ।
उता अर्थव वेदकै ११ को ५ को ८ मा रहेको ब्रह्मचर्य शुक्तमा महिलाहरुले पनि आफूलाई पुरुष सरह बिधार्थीका रुपमा बिधा आर्जनका लागि तयार हुन आव्हान गरिएको छ । यस शुक्तले महिला र पुरुषलाई समान अवसरका लागि पैरवी गरेको स्पष्ट पाइन्छ ।
अर्थव वेदकै ७ को ४७ को १ मा महिलाहरुलाई सकल ज्ञान को भण्डार अनि सम्पूर्ण कर्महरुको ज्ञानको श्रोतका रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।
यत्तिका आदर अनि सम्मानका साथ वेदमा महिलाहरुलाई बैवीको स्थान दिइएको छ । एकएक गर्दै अध्ययन गर्ने हो भने समानता अनि सदभावको लहर अनि श्रोतका रुपमा वेदलाई लिन सकिन्छ ।महिलाहरुले वेद पाठ गर्न नपाउने कपोलकल्पित कुराहरु केवल भ्रम फैलाइएका मात्र हुन् ।
महिला अनि पुरुष दुबैलाई बैदिक ज्ञानको सागरमा स्वागत छ ।